Mai Chibwe VekwaZimuto: Kukudza bhinzi.
Bhinzi kana imire muridzi ane zemo, inokwanisa kureba kubva pa 5mm kusvika pa 5cm zvichibva nokusiyana kwevanhukadzi. Kunakigwa kwava hakunei nokukura kwebhinzi saka hapana chakaipa pasaizi yebhinzi. Asi kungoti kune vamwe vane bhinzi dikidiki vanoona sokuti zviri nani kuva nebhinzi yakati kurei.
Tisati taenda mberi nenyaya iyi hwisisa kuti kune varume vanotyiswa nebhinzi zvokutoitiswa buka nayo kana yakakurisa. Koitazve vamwe vakadzi vane bhinzi huru chose kuti uku yakareba uku yakakora zvokutoti chero asina zemo inoonekera.
Koitazve varume vanoda bhinzi hombe. Iwe zivana nomurume wako nezvaanoda. kugaroisana mumba chinhu chakanaka. Mukadzi ndiye MANAGER wekuisana saka ndiye anorongera murume zvokuita. Ukasvoda murume wako ndiwe unoita dambudziko. Wana mukana wekuitisa murume wako zemo pese pese. Ukatanga nyaya yebhinzi akangoijoinira chete kana kubvunza mubvunzo, hazvichaiti kuti asamira chombo. Watowana mukana wekuiswa.
Bhinzi inonaka kutambwa nayo nomurume uye kutamba nayo wega iwe muridzi. Asi kukura kwayo hakuna basa. Chine basa kungoziva pairi chete uye kuziva makwizire aunofarira iwe. Zvadaro chidzidzisa murume maitigwe azvo iyewo achikudzidzsa mabatigwe echombo chake nemaoko muchikwizana musina kupfeka.
Kune vanoti ivo bhinzi yakati kurei iri nani kana une murume anohwisisa nyaya yokumwa bhinzi semunyatso kana kuikwiza norurimi. Kukwizwa bhinzi norurimi gunodziya kunonaka chose chose uye kunobatsira kukasira kutunda kwemukadzi. Bhinzi ir kumusoro kwechitubu saka hakueredzi sezvinoita mukati mechitubu. Kune varume vakawanda vanogaronyora vachihunza kuti zvekunanzva bhinzi zvineutano here? Chokwadi ndechokuti kana mese musingahuri uye mese musina zvigwere, kunanzva bhinzi kunonakira mukadzi wako chose kupfuura kupinzwa chombo saka ukatanga wambomusveta bhinzi ukazipedzisa nokupinza chombo unoita munhu anodiwa chose nomukadzi wako.
Iyewo akakusveta chombo akazopedzesa nokukuti pinza uchanakigwawo chose asi zvinohi bhinzi yomukadzi ine ma NERVES akawanda chose kupfuura ari pamusoro wechombo chomurume. Saka mukadzi anokwanisa kunakigwa kukupfuura, kana uchihwisisa kuti maitire anomunakura ndeapi.
Kukudza bhinzi kunokwanisika kana ukashandisa pombi dzokukurudzira ropa kuti riuye pabhinzi kwenguva refu. Pane zvipombi zvinoshandiswa kupomba bhinzi kusvika yazvimba iri mukati mepombi yacho. Womboisiya yakadaro kwenguva wozobvisa. Wopotazve uchiita nguva nenguva. Uchaona bhinzi yako yoti ukaita zemo inoti kurei kupfuura zvayange iri.
Pombi dzacho dzine mazera akati siyane asi dzinoshandiswazve kukudza minyatso. Varume vanofarira mazamu ane minyatso mirefu. Kana zviya muchiisana murume ari pamusoro ukamukweva musoro womupa munyatso unozvionera wega kuti anofarira kumwa zamu serusvava uye zvinokuitisawo zemo iwe. Minyatsi inomira kuti twii kana murume achitamba nayo.
Zvipombi zvacho zvinokurudzira ropa kuuya kumunyayso kuti umire. Ukajaidza munyatso kumira kwenguva refu inozoita sokuti yareba asi zvinohi inongoti korei zvokuwedzera kuonekera. Zvinohi varume vashomanana vasinganatsofarira minyatso murefu kana mikuru.
Patakatanga kutaura nezvipombi izvi. Zvakaonekwa kuti zvinouya zvakatonyogwa kuti UNISEZ, kureva kuti vese varume nevakadzi vanokwanisa kuzvishandisa paminyatso, zvichitoonekwa kuti inowedzera kukura.
Saka mubvunzo wobva ipapo ndewekuti ko sei chombo chisingakudzwi nepombi yakadai. Pombi dzechombo dziriko chose uye dzinoshandiswa nevarume vakawandisa. Asi zvinohi dzinongoshanda kuvhura tsinga dzinomisa chombo kuti dziwedzere ropa rinomisa chombo, chobva chagwinya pakumira. Zvinohizve chombo chinokwanisa kuti wedzerei kukora asi kureba hachiwedzeri kureba, zvisinei kuti washandisa pombi kwenguva yakadii.
Tese tinoziva kuti pachombo kukora kuri nani chose pakureba kana tichitarisa kunakigwa kwekukwiziwa mukati nechombo pakuiswa nomurume. Vakadzi vakawanda vanonetseka pakushinnya chombo asi vasinganetseki pakuti chapinnda zvakadii. Vakadzi vakawanda chose havatombohwi kudzika kwekupinda kwechombo pakuiswa, asi vanohwa chichikwiza madziro ekuno kumukova. Zvinoreva kuti murume ane chombo chikobvu anohwikwa kupfuura ane chitete chirefu.
Saka pombi idzi dzinokwanisa kuti murume akadzishandisa nguva refu chombo chinowedzera ropa rinosvika kwachiri, chowedzera kumira uye kukora mese monakigwa nazvo.
Koitazve kuti kugarobatabata chombo uchichipomba kudaro kunochijaidza kubatwabatwa zvokuti murume anokwanisa kuzononoka kutunda zvinova zvinonaka kumukadzi.
Saka apa tiri kuti kune mukana wekuwana zvekutambisa pakuita nyaya muchiseka henyu musina kupfeka muchirezvana. Kana mukatengerana zvipombi izvi munokwanisa kutombopombana makadaro muchifara. Chero zvikakuitirai, chero zvikatadza, munenge madzidza kuongororana pamberi uye munenge mamboita mwedzi wese muchiwedzera kuisana. Hapana chingahi chakaipa ipapo.
Kana ukapomba bhinzi zvakapfuuridza usina kujaira, inokwanisa kuzvimba uye kuramba yakazvima wabvisa pombi. Unokwanisa kugwadziwa zvokutozotadza kuiswa musi iwoyo, pamberi pachigwadza.
Posted by Mai E Chibwe at 12:48